Dalka Mareykanka ayaa waxaa maanta ka furmaya shir ay isugu imanayaan Hogaamiyeasha 50 dal oo afrikaan iyo Madaxweynaha dalkaas Brack Obama
Madaxweyneyaasha Afrika ayaa ku sii qul-qulayaa dalka Mareykanka, waxaana xubnahaasi ka mid ah Hogaamiyaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka dhoofay Muqdisho.
Wasiirka Arimaha dibada Soomaaliya C/raxmaan Du’ale Bayle ayaa sheegay inay isku diyaariyeen ka qeybgalka shirka madaxda Afrikaanka iyo Madaxweynaha dalka Mareykanka.
Wuxuu sheegay in Shirkaan Ahmiyad gaar ah uu u leeyahay dhanka Soomaaliya, maadaama ay jiraan baahiyo kala duwan oo ka jira gudaha dalka ayna u baahan yihiin in Mareykanka ay kala hadlaan.
Bayle ayaa sheegay in kulamo gaar-gaar ah ay yeelan doonaan Hogaamiyeyaasha Afrika iyo Madaxweynaha Soomaaliya, waxa ayna kawada hadli doonaan arimaha Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa aqoonsi buuxa ka heshay dhowaan dowlada Maraykanka, Safiirka cusub ee Soomaaliya uu warqadaha aqoonsiga ka Guddoomay Madaxweynaha Mareykanka.
Shirweynahan ayaa looga hadli doonaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka jira Afrika gaar ahaana looga ciribtiri lahaa kooxaha xiriirka la leh ururka Al-Qaacida sida Al-shabaab iyo Boko haram oo ka dagaalama Somalia iyo Nigeria, iyadoo Maraykanku uu kaalmo dhaqaale oo la siinayo afrika kaga dhowaaqi doono kulankaas